व्यापारीले मापदण्ड तोडे काठमाडौंमा फेरि लकडाउन हुन सक्ने प्रशासनको चेतावनी ! - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
व्यापारीले मापदण्ड तोडे काठमाडौंमा फेरि लकडाउन हुन सक्ने प्रशासनको चेतावनी !
सरकारले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने नाममा व्यापार व्यवसायलाई पनि चलायमान राख्ने प्रयास गरेको छ । तर बार अनुसारको व्यवसाय र पसल खोल्न दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गरे पनि व्यापार व्यवसायीहरुले यस्को अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीको असहमतिप्रति भने प्रशासन कठोर बन्दै काठमाडौं उपत्यकामा पुनः लकडाउन लागू हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भदौ २४ गते रातिदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दा व्यापारी व्यवसायीको आवाजसंग मजदूर वर्गको भलाईलाई महत्व दिइयो । भदौ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा कायम रहे पनि सवारीमा जोर विजोर पसल व्यवसायलाई पनि बार अनुसार खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
तर पसल व्यवसायीहरुले भदौ २५ गते बिहीबारदेखि नै प्रशासनको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै सबै खालका पसल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याए । अधिकांश पसल नखुले पनि जति खुलेका छन् तिनले तोडेको नियम अब सबै व्यवसायमा सर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
व्यापारीहरु भने प्रशासनको यो मापदण्डले आफुहरुमाथि आइलागेको समस्याको सम्बोधन नुहने जिकिर गर्दै आएका छन् । यता स्वयं काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ र ठेलागाडा सञ्चालन गर्न दिदा कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै फुटपाथ र ठेलागाडा व्यवसाय बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फुटपाथ र ठेलागाडाको बारेमा कुनै निर्णय नलिदै काठमाडौंमा जथाभावी खुल्न थालेको पसललाई लिएर आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ,तोकिएको मापदण्डको उल्लंघन गरे काठमाडौंले फेरि लकडाउन भोग्नु पर्ने चेतावनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको छ । कोरोना जोखिम नियन्त्रणमा काठमाडौं उपत्यकाले भोग्दै आएको निषेधाज्ञाको अवधि भदौ ३१ गते सकिदैछ ।